रेनुवि’रुद्ध साइवर अ’प’राध गर्नेहरुको सूचिमा परे यी व्यक्तिहरु – Darshan Nepal News
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रेनुवि’रुद्ध साइवर अ’प’राध गर्नेहरुको सूचिमा परे यी व्यक्तिहरु
5,817 1 minute read
काठमाडौं। भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालको च’रित्र ह’त्या गर्ने नियतले सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोष्ट हुन थालेपछि त्यसवि’रुद्द प्रहरी सक्रियताको माग उठेको छ। शनिबारका दिन ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा आ’क्र’मण भएपछि शाही समर्थकहरुले रेनु दाहालको चरित्र ह’त्या गर्न खोजेका हुन्। शाही समर्थकहरुले रेणु दाहालमाथि अ’श्लि’ल गा’ली गलौ’ज गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमा अपाच्य तस्वीर र अन्य सामग्री पोष्ट गरेका छन्।
जननिर्वाचित मेयरवि’रुद्ध गरिएको यस्ता हर्कतवि’रुद्ध नेपाल प्रहरीले सक्रियता देखाउन नसकेको भन्दै प्रहरीको समेत आलोचना गरिएको छ। रेणु दाहाल भने कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा देशबाहिर रहेको बेला ज्ञानेन्द्र शाहीको कार्यक्रम बिथोलिएको थियो। शाही समर्थकहरुले उक्त घ’टनामा रेणु दाहालको हात रहेको भन्दै उनको आलोचना गरेका हुन्। रेणु दाहालसँगै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत जोडेर आ’लो’चना गरिएको देखिन्छ।
रेणु दाहाल देशबाहिर रहेको बेला समेत उनलाई अनावश्यक रुपमा घ’टनासँग मुछेर प्रचारबाजी हुन थालेपछि समर्थकहरु आ’क्रो’शमा आएको देखिन्छ। यसअघि समेत रवि लामिछाने प्रकरणमा रेणु दाहालमाथि सुनियोजित आ’क्र’मण भएको बताउँदै समर्थकहरुले व्यक्तिको चरित्रमाथि नै प्र’हार हुने सामग्री तत्काल हटा’उन र दो’षीलाई का’र्वाही गर्न प्रहरीस’मक्ष माग गरेका छन्।
तर रेणु दाहाल समर्थक तथा नेकपाका नेता एवं कार्यकर्ताले शाही समर्थकहरुले सामाजिक अराजकता, अ’श्लि’लता र व्यक्तिको च’रित्र ह’त्या गर्ने काम गरेको भन्दै सबै अराजक तत्वहरुमाथि कडा का’र्वाही गर्न माग गरेका छन्। नेपालको कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री प्रकाशन या प्रसारण गर्ने कार्यलाई अ’पराध मानेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत भइरहेका यस्ता अ’प’रा’धमा प्रहरीले भने अहिलेसम्म कुनै का’र्वाही अघि बढाएको छैन।
सामान्यतः जाहेरी दिएपछि मात्रै का’र्वाही अघि बढाउने परिपाटी रहेको नेपाल प्रहरीको भूमिका साइबर अ’प’रा’ध निय’न्त्रणमा सक्रिय हुनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा गरिएको देखिन्छ। रेनु दाहालवि’रुद्ध साइवर अ’प’रा’ध गर्नेहरुमा सुरेश सुवेदी दीपक, भक्तबहादुर थापा, दीपक बुढा, रोहित कुमार खड्का, आकाश रिजाल लगायत छन्। उनीहरुको फेसबुक आइडी फेक हुन् वा होइनन् ? भन्ने कुराको खोजी भइरहेको छ।
यसका साथै उनीहरुलाई उकास्ने गिरोहको पनि खोजी भइरहेको छ। साइबर अ’प’रा’धमा चितवनकै केही युवाहरुको पनि संलग्नता देखिएको छ।
भाग्य छ भने तपाईले फेसबुकको यो पोष्ट शेयर गरेबापत ४.५ मिलियन डलर पाउने
चिसोमा बोराभित्रको बास : काठमाण्डौमा कोठा पाउन बूढी चाहिन्छ रे !
दशैको मुखमा सेफ्टी ट्यांकीभित्र एकै परिवारका ५ जनाको श,व भेटियो, घटनास्थलमा पुग्यो प्रहरी